Navoaka indray ny dokambarotr’i George Lucas tamin’ny taompolo 1980 tao amin’ny fahitalavitra Japoney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Oktobra 2018 8:50 GMT
Fanazavana: “Zava-baovao hatrany.” Pikantsary tao amin'ny YouTube, mpisera Twitter Retoro_mode.
Namoaka indray ny andiana dokambarotry ny fahitalavitra Japoney tamin'ny taompolo 1980 izay manasongadina ilay mpanatontsosa sarimihetsika Amerikana George Lucas malaza ao amin'ny Star Wars, ary mihira fiderana ho an'ny orinasa mpamatsy fitaovana elektronika goavana Panasonic ny Twitter Japoney.
Niresaka tamin'ny teny Japlish tsotra i Lucas ao amin'ireo dokambarotra ary nofaranany tamin'ny teny filamatra hoe “Itsumo zava-baovao”, izay azo adika mivantana hoe “zava-baovao hatrany”.
Tena mahafinaritra tokoa ity andiana dokambarotra amin'ny fahitalavitra ity.
George Lucas tao amin'ny dokambarotry ny fahitalavitra momba ny Panasonic tamin'ny taona 1988. Manontany tena aho raha mbola hita ao anaty aterineto daholo ireo rehetra ireo? Manapaingotra an'i @retoro_mode
Ilay mpisera Twitter Japoney Midorin, izay namoaka matetika ny sary sy lahatsary fahatsiarovana nalaina tamin'ny taompolo 1970, 1980 ary 1990 tany Japana tao amin'ny Twitter, nizara ireo dokambarotra George Lucas Panasonic maro, ary nanamarika ilay mpisera Twitter retoro_mode, manana ny famahanam-baovao Twitter mbola faran'izay marobe kokoa momba ny fahatsiarovana ny kolontsaina Japoney, mba hijerena bebe kokoa ireo dokambarotra mety ho hita an-tserasera.
Izany hoe nalefa tao amin'ny YouTube ireo andiana dokambarotra Lucas Panasonic iray manontolo .
Hatramin'ny faramparan'ny taompolo 1980 ka hatramin'ny fiandohan'ny taompolo 1990 – rehefa nitotongana ny “Toekarena an-dalam-pandrosoana” tao Japana, niseho matetika tao amin'ny fahitalavitra Japoney mba hampiroboroboana ny vokatra ho an'ireo mpijery tsy mitsaha-mitombo hatrany ny kintan'ny haino aman-jery Tandrefana toa an-dry Arnold Schwarzenegger, Billy Joel, Brooke Shields ary Eric Clapton. Loharanon-karena ahitana ireo dokambarotra izay efa hadino matetika ireo ny Youtube .
Nandrakitra dokambarotra miisa enina ho an'ny Panasonic i Lucas izay nalefa tamin'ny fahitalavitra Japoney tamin'ny taona 1987 sy 1988, taona vitsivitsy taorian'ny namoahana ny Retour de Jedi . Ao amin'ny dokambarotra iray, nampiroborobo ny zanabolan'ny fahitalavitra sy ny vata fahitalavitra an'ny orinasa i Lucas. Ao amin'ny iray hafa, nampiroborobo ny “MacLord Movie” Panasonic izy, tamin ‘ny haivarotry ny fakantsary hiaka farany. Ao anatin'ny iray hafa, Lucas sy ny “famoronany” vaovao, ilay raboto tsara fanahy antsoina hoe Sparky dia mihira ny fiderana ny Panasonic VCR.
Hita ao amin'ny YouTube avokoa ireo dokambarotr'i George Lucas tao amin'ny fahitalavitra momba ny Panasonic miisa enina: